Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Arbaca Ah Ay Wargeysyadu Qoreen |
HomeCiyaarahaWararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Arbaca Ah Ay Wargeysyadu Qoreen
Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka Ciyaartoyda Ee Maanta Oo Arbaca Ah Ay Wargeysyadu Qoreen
Suuqii iibka ciyaartoyda ee xagaagii waxa uu xirmayaa horaanta bishii October, waxaana dhowaan la sugayaa inuu furmo suuqa waqtiga jiilaalka ee bisha January oo muddo kooban ay kooxuhu u heli doonaan inay kaga faa’iidaystaan.
Sidii aad horeba barateen, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa si joogto ah, wararkii ugu dambeeyey suuqa iibka ciyaartoyda ee ay qoreen wargeysyada waaweyn ee Yurub iyo xanta hoose ee aan wali bannaanka usoo bixin ee sida sirta ah ay jaraa’idku uga heleen kooxaha ee la xidhiidha suuqa.
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa wararkii ay saaka oo Arbacaah qoreen wargeysyada waaweyn, waxaana xuquuqda wararkan iska leh isla wargeysyada aanu kasoo xiganay oo aanu magacooda war walba ku hor qornay.
Paris St-Germain ayaa ka fiirsanaysa inay dalab ka gudbiso xiddiga Portugal iyo Juventus ee Cristiano Ronaldo, haddii kooxda Talyaaniga ahi go’aansato inay iibiso 35 jirkan. (Mail)
PSG waxay wada-hadallo heerkoodu sarreeyo kula jirtaa xiddiga reer Brazil ee Neymar, iyadoo 28 jirkanna uu ku faraxsan yahay inuu shan sannadood oo heshiis ah qalinka ku duugo. (ESPN)
Arsenal ayaa ka mid noqotay tiro kooxo reer Yurub ah oo xiisaynaya weeraryahanka reer Brazil ee Brenner oo ah 20 jir u ciyaara Sao Paulo. (Calciomercato)
Difaacii hore ee Liverpool ee Jamie Carragher ayaa rumaysan in Manchester United ay iibin doonto kubbad-sameeyaha reer France ee Paul Pogba oo 27jir ah. (Talksport)
Manchester United waxay u dhaqaaqi doontaa khadka dhexe ee Aston Villa iyo xulka qaranka England Jack Grealish oo 25 jir ah, haddii uu Pogba ka tago Old Trafford. (Manchester Evening News)
Barcelona waa inay ciyaartooyo iibiso bisha January si ay ula soo saxeexan karto weeraryahanka Lyon iyo Netherlands ee Memphis Depay oo 26 jir ah. (Lyon)
Arsenal waxay qarka u saarnayd inay lasoo saxeexato laacibka dhexda uga ciyaara Borussia Dortmund ee Jude Bellingham oo 17 jir ah, xilligii uu joogay Birmingham City sannadkii 2019kii. (Sky Sports)
Gunners waxay wada-hadallo la furtay laacibka khadka dhexe uga ciyaara RB Salzburg ee Dominik Szoboszlai oo 20 jir ah. Arsenal waxay ku doonaysaa laacibkan reer Hungry lacag dhan £22 milyan oo Gini. (Football Insider)
Leicester City ayaa wada-xaajood heshiis kordhin ah la bilowday difaaceeda Jonny Evans. Laacibkan u dhashay Northern Ireland ee 32 jirka ah ayaa galay sannadkii ugu dambeeyey ee heshiis saddex sannadood ahaa oo uu hore u saxeexay. Athletic)
Laacibka khadka dhexe ee Chelsea ee Danny Drinkwater ayaa doonaya inuu iskaga tago Stamford Bridge, xilli uu si gaar ah tababarka u qaadanayo. (Mail)
Nocolas Pepe oo garabka weerarka uga ciyaara Arsenal iyo Ivory Coast ayaa ka sanqadhiyey sida uu uga cadhaysan yahay waqtiga yar ee ciyaareed ee laga siiyo Arsenal. (Canal Plus)
Weeraryahankii hore ee xulka qaranka Croatia ee Mario Mandzukic oo 34 jir ah oo xor noqday markii uu ka tegay kooxda reer Qatar ee Al-Duhail, ayaa u dhow inuu ku biiro kooxda reer Spain ee Calta Vigo. (Mundo Deportivo)
Athletic Bilbao waxay ka fiirsanaysaa inay beddesho tababaraheeda Gaizka Garitano, ayna xilka u dhiibto macallinkii hore ee Tottenham ee Mauricio Pochettino oo lala xidhiidhinayo Manchester United. (Marca)
Goolhayaha Liverpool iyo Republic of Ireland ee Caoimhin Kelleher oo 21 jir ayaa doonaya in kooxdiisu ay amaah ku bixiso bisha January, si uu u helo waqti ciyaareed oo badan. (Liverpool Echo)
Xiddiga koox la’aanta ah ee ee Jack Wilshere ee hore dhexda ugaga ciyaari jiray Arsenal ayaa sheegay in aanu waligii ku biiri doonin Tottenham, sababtoo ah cadaawadda ka dhaxaysa Arsenal. (Goal)
Laacibka Manchester United iyo England ee Jesse Lingard oo 27 jir ah ayaa joojiyey la shaqaynta wakiilka caanka ah ee Mino Raiola. (ESPN).